Imibhalo Engokomlando Yezempilo - Kerry Blue Terrier Foundation
Ezempilo | Okuthunyelwe kwemininingwane yezempilo mayelana nenja yeKerry Blue Terrier.
Shiya amazwana / Ukulimala / By Umhleli wewebhu we-KBTF / June 28, 2019 June 29, 2019 / Lameness, Imnene, Ukwelashwa / Amaminithi we-2 wokufunda
Shiya amazwana / Impilo / By Umhleli wewebhu we-KBTF / September 4, 2018 July 18, 2019 / ukugula, iphunga lokutheleleka, iphunga, iphunga / Amaminithi we-8 wokufunda
Ephunga le-trail kulokho okuhlukumeza inja yakho. Ungazihogela ngokweqiniso izinhlobo ze-8 zokugula esilwaneni sakho - uma wazi ukuthi kufanele uzitholele ini. Ungafunda okuningi ngempilo yenja yakho ngokumhlwitha. Uma kuza…
Isihlakala Sokugula Funda kabanzi "